Isaaka zanak'i Abrahama - Wikipedia
Isaaka zanak'i Abrahama
Mitsodrano an'i Jakoba i Isaka, nataon'i Govaert Flinck (1638)
I Isaaka na Isaka dia lehilahy voalaza ao amin'ny Baiboly ho zanak'i Abrahama sy i Saraha sady rahalahy tsy iray reny aminy i Ismaela. Nanambady an'i Rebeka izy ka niteraka an'i Esao sy i Jakôba. Nanohy ny fivavahan-drainy amin' Andriamanitra tokana (monoteisma) i Isaaka sady nampita izany tamin'ireo zanany, indrindra tamin'i Jakôba izay atao hoe koa Israely. Niampita taminy ny tsodrano azon'i Abrahama sy ny fampanantenan'Andriamanitra ny tany Kanaana ho an'ny taranany izy; nampitainy tamin'ny iray amin'ireo zanany izany rehetra izany, dia i Jakôba izay nahazo izany am-pitaka. Ny Baiboly no mitantara izany rehetra izany nefa ny boky masina hafa toy ny Kor'any koa dia manana ny fomba fitantarany azy. Atao hoe יצחק / Yiṣḥāq io anarana io amin'ny teny hebreo.
Ny lahatsoratra telo ao amin’ny bokin'ny Genesisy (na Jenezy) no miresaka azy, izay samy manana ny fomba fitantarany azy: Gen. 17.17 (tahirin-kevitry ny mpisorona) sy Gen. 18.12 (tahirin-kevitra iahvista) ary Gen. 21.6 (tahirin-kevitra elohista). Izany dia miresaka ankolaka ny maha zana-behivavy momba an’Isaaka.
Ao amin’ny fitantaran’ny Genesisy, i Isaaka, izay nampanantenain’Andriamanitra an’i Abrahama (Gen. 21.1-8), dia nanambady an’i Rebeka (Gen. 24). Tsy dia misongadina loatra i Isaaka raha mitaha amin’i Abrahama sy i Jakôba. Ny fitantarana mahakasika azy dia mifamatotra amin’ireo lava-drano fantsakana sy ny fitoerana masina hita nanodidina an’I Gerara sy I Beerseba ao amin’ny faritra atsimon’i Palestina (Gen. 26). Rehefa vita ny tetiaran’ny Patriarka, izay nanandratra ny famondronana ho foko, dia maro ireo lovantsofina momba azy manokana izay novana hahakasika an’i Abrahama kokoa. Ny fahatsiarovana an’I Isaaka dia mifamatotra amin’ny fitantarana malaza sy mampihetsi-po momba ilay fanaovan-tsorona azy, izay mahakasika an’i Abrahama nozahan’Andriamanitra toetra aloha (Gen. 22). Mahagaga ihany ny mahita ny fivoaran’ny tantara ao amin’ny soratry ny raby: tsy zaza i Isaaka fa olon-dehibe matanjaka tokony ho 37 taona, ka tsy tokony ho azon-drainy fatorana tsy an-tsitrapo, dia ny rainy izay efa antitra. Hamafisina araka izany ny fanoloran-tena an-tsitrapo nataon’ilay zanaka hatao sorona, izay noraisin’ny Kristiana hanoharana ara-tandindona an’i Jesoa (na Jesosy) izay nanolo-tena hatao sorom-panavotana ho an’ny olombelona rehetra.
Ao amin’ny sorany i Filo avy any Aleksandria (De Cherubim sy De Abrahamo) dia manao heviteny ny amin’ny fahaterahan’ny Patriarka ka mihevitra izany ho fiterahan’Andriamanitra ny hasina ao amin’ny fanahin'ny olombelona, izay niova tsikelikely hanam-pahafahana hahazo ny toetra tongalafatra tandindomin’i Isaaka, na koa handray ny fanomezam-pahasoavan’ny fahatongalafatra, izay tsy maintsy avy amin’Andriamanitra irery ihany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaaka_zanak%27i_Abrahama&oldid=996533"
Voaova farany tamin'ny 21 Aogositra 2020 amin'ny 08:38 ity pejy ity.